Broadcast Beat Magazine အတွက် #NABShow Film Crew ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 NAB ပြရန် » အသံလွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်းများအတွက် #NABShow ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လေယာဉ်အမှုထမ်းကြေညာ
အသံလွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်းများအတွက် #NABShow ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လေယာဉ်အမှုထမ်းကြေညာ
, သင်အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းစတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်ထဲမှာအကြွင်းမဲ့အာဏာအကောင်းဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ယူလာရန်ကျူးလွန် - www.broadcastbeat.com - က၎င်း၏ကြေညာတာဖြစ်ပါတယ် NAB ပြရန် LIVE - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်လေယာဉ်အမှုထမ်း Beat ။
ft ။ Lauderdale, FL (GCOMM) ဧပြီ 6, 2014 - "အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat" ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်သင်္ဘောသား 2014 မှာ "လယ်ပြင်၌" ရိုင်ယန် Salazar အတိုင်းလိုက်နာရှိခြင်းအားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ထိပ်ဆုံးဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ် NAB ပြရန်.
: တစ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအတွက်တွေ့ - ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်္ဘောသားဖော်ပြထားတဲ့အတိုကောက်စာရင်းထွက် Check www.broadcastbeat.com.
ငါ့ကိုဆက်သ Allow ...
Ed က Ethridge: Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး - ကထုတ်လုပ်မှုမှကြွလာသောအခါဒီအဝါရင့်စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်သူအထူးသဖြင့်အဘို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကသောသူသည် NAB ပြရန် ဗီဒီယိုများနှင့် NAB ပြရန် တိုက်ရိုက်မိတ်ဖက်။
Diogo ဆေးလ်ဗား: ဗီဒီယိုကိုထုတ်လုပ်သူ - တစ်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သည်နှင့်ရွေ့လျားမှု-ဂရပ်ဖစ်လိုလားသူအမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရုပ်ရှင်စတိုင်ဗီဒီယိုများရမှတ်များထုတ်လုပ်ခဲ့သူတစ်ဦးအောင်မြင်သောရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။
Lynette Abeyta: အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ - အတွေ့အကြုံလက်ထောက်ဒါရိုက်တာနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလက်ထောက်ဖြစ်၏ လည်း Webisodes, ကြော်ငြာ, Sizzle Reels နှင့်နိုင်ငံတကာပါ Music Videos ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
ဂျက်စီကာ Quinn: ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင် - မှာ-အန္တရာယ်လူငယ်မှနွေရာသီရုပ်ရှင်အစီအစဉ်များကိုသွန်သင်နှင့်ဒေသခံရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ဓါတ်ပုံပညာအလုပ်၏အလွတ်တန်းကင်မရာစစ်ဆင်ရေးနှင့်ဒါရိုက်တာပါဘူး။
NIC Rios: on-ကင်မရာသတင်းထောက် - ထဲမှာကျယ်ကျယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူတစ်ဦးအတွေ့အကြုံရှိ On-ကင်မရာစွမ်းရည်ဖြစ်ပါသည် Los Angeles မြို့ နှင့် Las Vegas မှဒေသများ။
ကယ်လီအမ်း Gorman: ဆံပင် & မိတ်ကပ် - ထိုအထက်တန်းလွှာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တစ်ခရုဇ်သင်္ဘောပေါ်မှာဘုတ်အဖွဲ့ပုဂ္ဂလိကရွက်လှေများနှင့်ဂျက်လေယာဉ်ပေါ်တွင်တိုင်ပင်ဖို့ထောင်ပေါင်းများစွာရန်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲပေးခြင်းရှိမရှိ, ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးထူးခြားဆန်းပြားနှင့်ဝေးလံခေါင်သီနေရာများမှခရီးထွက်ခဲ့သည်။
သူ Mike Garcia က: စန်းအော်ပရေတာ - reels sizzle မှတီဗီရှိုးကနေအရာအားလုံးအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ သူကတစ်ဦး jack ကို-of All-အရောင်းအဘယ်သူ၏အဓိကအာရုံစိုက်အလင်းရောင်သို့မဟုတ်အသံကဖြစ်ပါတယ်ပါပဲ။
ကိတ် Cooley: မီဒီယာထုတ်လုပ်ရေးလက်ထောက် - သူမကနောက်ကွယ်မှရေဒီယို, On-screen ကိုရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားများတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်အတိုင်း, အလွန်ကောင်းစွာ rounded ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအများအပြားအပိုအခန်းကဏ္ဍနှင့်ကွန်ယက်ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာအသေးစိတျအပိုငျးအတွက်သူမ၏မြင်ကြပြီဖြစ်နိုင်သည်။
ဤအတူညီသောလူအတော်များများသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ရဲ့ကာလအတွင်းကဒီထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ NAB ပြရန် သူတို့ပြုသောအမှုအံ့သြခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမယခုနှစ်အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုပြောပြဒါမှမဟုတ် Show ကိုကြမ်းပြင်ပေါ်တိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးနေစဉ်ဖမ်းမိပါလိမ့်မည်သောအရူးလှောင်ပြောင်သရော်မှုတွေရှိတယ် "ဟုအဆိုပါလယ်ပြင်၌တည်၏။ "
ထုတ်လွှင့်မဂ္ဂဇင်းစတူဒီယိုစက်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးလူတွေစောင့်ရှောက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဤထူးချွန်နှင့်အတူဒါလုပ်နေတယ် Beat NAB ပြရန် ရုပ်ရှင်အမှုထမ်း LIVE ။
2014 NAB ပြရန် 2014 NAB ပြရန်, NAB ပြရန် 2014 အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်လေယာဉ်အမှုထမ်း Beat LIVE NABShow! 2014-04-06
ယခင်: ခရစ်စသည့် authoritative Visual ပြရန်နှင့်အတူတပ်ဦးနှင့် NAB 2014 မှာရေးစင်တာသည် ...
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါအသံလွှင့် Beat အဖွဲ့သို့ Curtis မီးဖိုချောင်၏ထို့အပြင်ကြေညာ